'यस मानिसले आफ्नो पूरै परिवार गुमायो': एरिका मेनाले सफारीलाई केलिन गार्सियाको साथमा धोका दिएको आरोप लगाएकी छिन्, उनी भन्छिन् कि उनी मात्र एक साथी हुन् - पप संस्कृति
'यस मानिसले आफ्नो पूरै परिवार गुमायो': एरिका मेनाले सफारीलाई केलिन गार्सियाको साथमा धोका दिएको आरोप लगाएकी छिन्, उनी भन्छिन् कि उनी मात्र एक साथी हुन्
प्रेम र हिप हप स्टार एरिका मेना र सफारी सैमुअल्सले २ second जूनमा आफ्नो दोस्रो सन्तानको साथमा स्वागत गरे र घोषणा गरे कि उनीहरु एउटा केटा छन्। मेनाले बिहे गरे र्‍यापर अक्टोबर २०१ in मा र मेनाले फेब्रुअरी २०२० मा छोरीलाई जन्म दिइन् - सफायर मेजेस्टी स्यामुएल।
Erica Mena shared (meiamerica_mena) ले पोस्ट साझा गर्नुभयो।
एरिका मेना, जो पहिले बो वाह संग व्यस्त थिईन्, मे २०२१ मा स्यामुएल्स बाट सम्बन्ध विच्छेद को लागी निवेदन दर्ता गरिन्। मेनाले अदालतको कागजातहरुमा मेलमिलापको कुनै आशा बिना रेपर संग उनको विवाह अपरिवर्तनीय भंग भएको बताइन्।
शमूएल कथित रूप मा मेना संग बिहे गर्दा एक प्रेम बच्चा को पिता भएको थियो। त्यसपछि उनी इन्स्टाग्राममा भन्दै थिए - मेरो १ बच्चा जन्मेको छ, टोपी फैलाउन बन्द गर्नुहोस्।
Safaree 🇯🇲 StuntMan (afasafaree) ले पोस्ट साझा गर्नुभयो।
सुपर जूनियर को सबै भन्दा राम्रो
एरिका मेनाले आफ्नो पतिलाई उनको हेरचाहमा संलग्न हुन असफल भएको वा अस्पतालमा उनको भर्खरको बसाईको क्रममा अस्पतालमा भेट्न नसकेको आरोप लगाए, जहाँ उनी आफ्नो गर्भावस्था सम्बन्धी धेरै दिन सम्म रात बिताए - अदालतका कागजातहरु अनुसार।
एरिका मेनाका शब्दहरुको तौल बढ्न सक्छ किनकि उनका पति चार दिनसम्म एनआईसीयूमा आफ्नो छोरालाई भेट्न अस्पताल गएनन्। अब मेनाले सफारीले कथित रूपमा माया र हिप हपका कास्ट सदस्य काइलिन गार्सियासँग धोका दिएको आरोप लगाएकी छिन्।
Kaylin गार्सिया को हुन्? जो बुडेनको पूर्व एरिका मेनाले इन्स्टाग्राममा उनलाई र सफारीलाई फोन गरे
एरिका मेना इन्स्टाग्राम कथाहरु भन्दै भनिन्- त्यसैले aykaylin_garcia तपाईं मियाना मा सबै पनी सप्ताहांत मेरो श्रीमान् राजा हुनुहुन्थ्यो। हाम्रो एउटा छोरो छ जो भर्खरै जन्मेको थियो र अझै घर छैन। के उसले तपाइँलाई भन्यो कि जब उसले तपाइँलाई आज राती तल बस्न भन्दै थियो?
एजे ली र डेनियल ब्रायन
इन्स्टाग्राम मार्फत छवि
एरिका पुरुष थपियो:
aykaylin_garcia असली कुराकानी म एक मानिस जो एक डबल जीवन बिताउने संग जुत्ता को जुत्ता मा भएको थियो र म कुनै सुराग उनी विवाहित थिए। तर तिमी! Safaree विवाहित छ थाहा छ। यो कसलाई थाहा छैन। उल्लेख नगर्ने जो जोडेन आफ्नो पूर्व संग वास्तविक साथीहरु। सफारीको भर्खरै एउटा बच्चा थियो जो उसले ४ दिन मा देखेको छैन कि एनआईसीयू मा छ। यो पनि कुनै रहस्य छैन। मँ तपाइँ दुबैलाई ब्लास्ट गर्दैछु किनकि उसले तपाइँलाई आज राती तल बस्न भन्यो- स्पष्ट रूपमा तपाइँ दुबैलाई थाहा छ मलाई थाहा भयो कि तपाइँ सबै सप्ताहन्तमा एफ ** राजा हुनुहुन्थ्यो। मेरो छोरा अझै एक हप्ता पुरानो छैन र उसले d*cking तपाइँ तल। मलाई आशा छ कि यो केहि हो कि तपाइँ छोटोमा गर्व गर्नुहुन्छ। यो मान्छे आधिकारिक रूपमा आफ्नो सम्पूर्ण परिवार गुमायो। म तपाइँ दुबैलाई शुभकामना दिन्छु।
एरिका मेनाले र्‍यापरलाई बाहिर बोलाएर भनिन् कि उनी सफारीबाट आफ्नो परिवार टाढा छिन्।
Кауℓιи Gαя ¢ ια ♏️ (aykaylin_garcia) ले पोस्ट साझा गर्नुभयो।
काइलिन गार्सिया, र्‍यापर जो बुडेनको पूर्व, उनी र सफारी मात्र साथी हुन् भन्ने दाबी गर्दै उनको कथाहरु लिएर गए:
वर्षौंदेखि म आफैंमा छु। कुनै ब्लग, कुनै नाटक, मँ एक महिला जो जवाबदेही र नैतिकता को बारे मा छु। तथ्य यो हो कि मलाई बिल्कुल केहि को लागी बाहिर बोलाइएको छ, मेरो लागी पागल छ। म र सफारी साथी हौं र अरु केहि छैन, धन्यवाद! सबै आशीर्वाद रहनुहोस्, र माया र प्रकाश फैलाउन जारी राखौं!
एरिका मेना को एक १४ वर्षीय छोरा, राजा, पूर्व, राउल कोन्डे संग छ।
wwe स्म्याकडाउन ४/२१/१
कसरी सम्बन्ध मा ईर्ष्या बाट छुटकारा पाउन
सेल मा नरक कहिले सुरु हुन्छ?
ब्रेकअप गर्न को लागी सही तरीका
कसरी एक हारेको जस्तो महसुस नगर्ने
कसरी एक ईर्ष्यालु प्रेमिका हुन